Soomaaliya iyo Jarmalka oo ka wada hadlay aduun dhan 36 milyan oo Euro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaaliya iyo Jarmalka oo ka wada hadlay aduun dhan 36 milyan oo Euro
A warsame 13 November 2014
Mareeg.com: Mas’uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kula kulmay wadi uu hoggaaminayay wakiilka wasaaradda horumarinta dhaqaalaha ee Jarmalka u qaabilsan Geeska Afrika.
Prof. Cabdullaahi Sheekh Cali (Qalloocow) oo ka tirsan golaha wasiirrada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in wafdiga ay ka wadahadleen sidii loo hirgelin lahaa heshiis dhaqaale oo 1979-kii dhexmaray dowladihii Soomaaliya iyo Jarmalka.
Dhawaan ayay aheyd markii dowladda Soomaaliya sheegtay iney ka shirtay qorshe loo dejinayo sidii wax loogu qabsan lahaa lacagta faraha badan ee laga sugayo dalka Karmalka.
Alshabaab oo weerar la beegsaday taliye sare oo ka tirsan milteriga Soomaaliya